Nhau - Ruvara & Chem Pakistan EXPO
Ruvara & Chem Expo chiitiko chakasarudzika chekupa yakakwana uye mhando yepamusoro masevhisi kumakemikari, madhayi uye indasitiri yakabatana kumisikidza brand, kukudziridza misika mitsva uye kutyaira kutengesa. Ruvara & Chem Expo 2019 inopawo nzwisiso mune iri kubuda mikana yebhizinesi yezvikamu izvi. Foring yatora chikamu muiyi EXPO kanokwana kana. Mumusangano wevaratidziri, Foring akaita hurukuro nezve Sarufa Soko Musika Kukura 2020. Kutaura kwacho kwakataura nezve Sarufa Nemaindasitiri kuongororwa nemari, matunhu, budiriro, share uye maitiro.
Sarufa Nhema ine zvakawanda zvakanaka. Iko kunaka kwekutsanya zvivakwa, kudhura mashandiro & kunyevenuka kwekushandisa pasi peakasiyana mamiriro ekugadzirisa mamiriro, kupera-kuenderera uye kuenderera kunoita kuti ive imwe yeanonyanyo kufarirwa dyestuffs.
Hunhu - yakakwira tinctorial kukosha, kunyungudika kwakanaka & kupinda kuri nani
Kuita kwakanakisa kudhaya mwero, kukwirira kwekuvaka & mumvuri kuenderana
Properties mwenje mwenje, kuwacha & ziya kukasira. Kumisikidza crocking & yakashata Chlorine kutsanya (inobatsira mukushambidza kweDenim)
Kupfuurirazve, sarudzo yakasarudzika yemhando dzakasiyana siyana dzakajairika, leuco uye fomu yakanyungudika ndicho chinhu chikuru chinopa kuti kuenderere mberi kuvepo nekuwedzera kuwedzera kudiwa kweiyi kirasi ye dyestuff. Musika wepasi rose weDyestuffs unotarisirwa kusvika US $ 5.9 bil mu 2010, iine CAGR - 3.8%. Mumusika wepasi rose, Sulfur Dyes inotarisirwa kuverenga chikamu cheinenge 6%.
Mufananidzo wekutanga unoratidza kuti Foring mutevedzeri wemutungamiri anogamuchira iyo modhi inoratidzira mukombe wakapihwa nemurongi muna 4th Ruvara & Chem EXPO. Mufananidzo wechipiri unoratidza kuti 5th Ruvara & Chem EXPO vashanyi vanouya kudumba redu.
4th Ruvara & Chem Pakistan EXPO 2018
5th Ruvara & Chem Pakistan EXPO 2019